Top 10 loa kéo cũ tại Điện máy XANH hát karaoke hay không nên bỏ lỡ | Muasalebang - Muasalebang
Top 10 loa kéo cũ tại Điện máy XANH hát karaoke hay không nên bỏ lỡ | Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 loa kéo cũ tại Điện máy XANH hát karaoke hay không nên bỏ lỡ | Muasalebang in Muasalebang
1 Ufuna ukuba umnikazi wesipikha sangempela ngentengo eshibhile enezinsiza ezigcwele kanye newaranti, kodwa isabelomali sakho asikuvumeli ukuthenga izipikha ezintsha. Ngakho-ke masibhekise ngokushesha kuzikhulumi ezindala eziyi-10 e-Dien May XANH ngekaraoke enhle okungafanele uyiphuthe esihlokweni esilandelayo!
1.1 kuqala I-LG RL2 isipikha sekaraoke esingu-50W
1.2 2I-Samsung Tower Speaker MX-T70/XV
1.3 3 Isipikha se-Karaoke i-Nanomax S-900
1.4 4 I-Nanomax S-1000 Isipikha se-Karaoke 450W
1.5 5 Isipikha se-Mobell K1507
1.6 6 I-Dalton Karaoke Speaker TS-12G450X
1.7 7I-Mobell MK-2120C 30W .donsa isipikha
1.8 8I-Samsung Tower Speaker MX-T50/XV
1.9 9Isipikha sikagesi i-Karaoke Birici MX-700
1.10 eziyishumiI-Dalton TS-15G600X Isipikha se-Karaoke 600W
Ufuna ukuba umnikazi wesipikha sangempela ngentengo eshibhile enezinsiza ezigcwele kanye newaranti, kodwa isabelomali sakho asikuvumeli ukuthenga izipikha ezintsha. Ngakho-ke masibhekise ngokushesha kuzikhulumi ezindala eziyi-10 e-Dien May XANH ngekaraoke enhle okungafanele uyiphuthe esihlokweni esilandelayo!
Uhlu lwezipikha ezingezansi luthathwe ohlwini lwezikhulisa-zwi ezisetshenzisiwe nezishibhile ezifanele ukuthengwa e-Dien May XANH, olubuyekeziwe. Julayi 2021 lapha.
Kuye ngesitolo ngasinye esifundeni, kuzoba nenani elihlukile lemikhiqizo, ungabuyekeza indawo yamanje ukuze ubone imininingwane futhi uthole izeluleko ezingcono ngemikhiqizo.
kuqala I-LG RL2 isipikha sekaraoke esingu-50W
I-LG RL2 isipikha sekaraoke esingu-50W Idizayini yesimanje, ubuntu, enomklamo ococekile ofanele ukubekwa kunoma iyiphi indawo. Umkhiqizo unesibambo esivumelana nezimo, kulula ukusiphatha noma yikuphi.
Isipikha se-karaoke se-LG Lokhu kunokufaneleka isilinganiso 50W kanye nemisindo evelele ukusiza abasebenzisi bazizwe benomdlandla futhi bekhanga lapho bedlala ingoma. Uma sicwiliswa ephathini ejabulisayo, lesi sipika siphinde sibe nekhono lokulungisa ukukhanya ngemiphumela ye-LED Imibala eminingi ehambisana nesigqi somculo.
Ikakhulukazi, lo mkhiqizo awukwazi ukuxhunywa embobeni ye-USB kuphela, kodwa futhi unesici sokuxhuma nayo 3 amadivayisi nge-Bluetooth, okwenza ukudlalwa komculo futhi ukushintshashintsha kube nezimo.
Inani lomshini wesibili ovela: 1,520,000 iwinile ithusi
Intengo yomshini omusha: 5,390,000 VND ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 3,870,000 VND I-VND (72%)
Izintengo zomkhiqizo zingashintsha kuye ngesimo samanje somkhiqizo kanye nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lamanje ukuze ubuke ulwazi mayelana nomkhiqizo wesipikha se-LG RL2 50W lapha.
2I-Samsung Tower Speaker MX-T70/XV
I-Samsung Tower Speaker MX-T70/XV inomklamo oyingqayizivele wombhoshongo onezipikha ezi-2 ukuze udale umsindo we-omnidirectional osabalala kuyo yonke indawo yokuhlala. Ikhwalithi yomsindo ephezulu yenza yonke ithoni ye-bass iphile nge-woofer eyakhelwe ngaphakathi ukuze uthole umuzwa omuhle kakhulu womsindo.
Lesi sipika sombhoshongo sinamandla okufika ku 150W dala umsindo wokuqhuma osabalalayo. Ngaphandle kwalokho, izikhulumi ze-Samsung zingaphinda zilungise ukukhanya ngemiphumela ehlukahlukene I-LED DJ, ikunikeza umuzwa wokukhangwa Yenza iphathi ibe nkulu futhi ibe mnandi.
Yini ekhethekile, abasebenzisi bangashintsha babe U-DJ emaphathini sebenzisa lezi zipikha lapho ulungisa umsindo ngohlelo lokusebenza lwe-GIGA Party Audio. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo nawo unomsebenzi Ukudlala kweqembu, vumela abasebenzisi ukuxhumana okuningi Izipikha ze-Samsung tower ndawonye sibonga, ukusiza ukwandisa isipiliyoni, umsindo ujabulisa kakhulu ezindlebeni.
Inani lomshini wesibili ovela: 4,320,000 iwinile ithusi
Intengo yomshini omusha: 10,990,000 iwinile ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 6,670,000 VND I-VND (61%)
Xem Thêm Loa JBL CLIP 4 | Giá rẻ, bảo hành 1 năm, hỗ trợ trả góp | Muasalebang
Intengo yomkhiqizo ingase ishintshe kuye ngesimo samanje somkhiqizo nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lakho lamanje ukuze ubuke ulwazi lomkhiqizo mayelana ne-Tower speaker MX-T70/XV kulokhu.
3 Isipikha se-Karaoke i-Nanomax S-900
Isipikha se-karaoke i-Nanomax S-900 inobunyoninco kanye nokuqina uma sisebenzisa izinto zokhuni ezipendwe ngombala omnyama, ingaphambili limbozwe ngombala wethusi oheha amehlo, okwenza ukubukeka okunethezeka nokuqina. Ngalesi sici ungakwazi ukuhlanza kalula futhi usize ukuvimbela imihuzuko lapho isetshenziswa.
Ngomthamo ophelele wokufika 420W ingenza umsindo uphindaphindeke, ucace, ucace, uhehe. Umkhiqizo uklanywe isibambo namasondo angu-4 amancaneokwenza kube lula ukuya emuva naphambili.
Ikakhulukazi I-Nanomax S-900 ube nesikhathi eside sokusebenzisa, kusukela 4 – 8 amahora imali eyodwa kuphela egcwele. Ukwengeza, lapho ibhethri liphela, ungakwazi ukushaja kalula futhi ulisebenzise, ​​ukwenze kube ntofontofo ukuyisebenzisa ngaphandle kokuphazamiseka. Umkhiqizo futhi uza nemakrofoni engenantambo, okwandisa ulwazi lapho ucula i-karaoke.
Inani lomshini wesibili ovela: 2,360,000 VND
Intengo yomshini omusha: 5,490,000 VND ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 3.130,000 iwinile I-VND (57%)
Izintengo zomkhiqizo zingashintsha kuye ngesimo samanje somkhiqizo kanye nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lamanje ukuze ubuke ulwazi mayelana nomkhiqizo wesipikha we-Nanomax S-900 lapha. .
4 I-Nanomax S-1000 Isipikha se-Karaoke 450W
I-Nanomax S-1000 Isipikha se-Karaoke 450W Idizayinwe kahle, enethoni enhle ophuzi gqamisa, dala amagama esipika. Umkhiqizo wakhiwe ngezibambo namasondo angu-4 njengepotimende, abasebenzisi bangakwazi ukuwahambisa kalula.
Imikhiqizo enamandla afinyelela ku 450W ngezipikha ezinezindlela ezimbili, okwenza umsindo ucace futhi uqine. Ikakhulukazi umthamo muhle impela, isikhathi sokusebenzisa yinde Amahora angu-4-6 Udinga ukushaja oku-1 kuphela. Ngaphandle kwalokho, ungayisebenzisa ngokuguquguqukayo ngenkathi ibhethri liphela ngoba isipika sisekela kokubili ukushaja nokusetshenziswa.
Izipikha ze-Karaoke ze-Nanomax lokhu ibhonasi eyengeziwe 2 imibhobho engenantambo esizinikezele ukukusiza ukuthi uvule i-karaoke noma kunini, noma kuphi. Futhi, umkhiqizo uyasekelwa Izimbobo zokuxhuma ezihlukahlukene: izimbobo ezingenantambo nezinezintambo.
Inani lomshini wesibili ovela: 2,620,000 iwinile ithusi
Intengo yomshini omusha: 6,690,000 VND ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 4,070,000 VND I-VND (61%)
Izintengo zomkhiqizo zingashintsha kuye ngesimo samanje somkhiqizo kanye nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lamanje ukuze ubuke ulwazi mayelana nomkhiqizo wesipikha we-Nanomax S-1000 lapha. .
5 Isipikha se-Mobell K1507
Isipikha se-Karaoke se-Mobell K1507 siklanywe ngokulingana nobuhle, ibhokisi lesipika lenziwe ngokhuni, eliletha kokubili ubuciko kanye nekhwalithi yomsindo engcono. Ngokuhambisana nalokho, isipika sakhelwe saba namasondo angu-4 nesibambo, sikunikeza ukuguquguquka nokukhululeka ekuhambeni uye emuva naphambili.
Imikhiqizo enamandla afinyelela ku 1000W, enezipikha ezinezindlela ezi-3 zomsindo ophindelelayo ezifanele ukusetshenziswa emaphathini amakhulu angaphakathi nangaphandle. Ikakhulukazi, abasebenzisi bangakwazi ukulawula kalula isipika bekude ngesilawuli kude.
Ungakwazi ukucula ngokugculisayo kwenhliziyo yakho ku-karaoke noma nini, noma kuphi ngamakrofoni angu-2 afakiwe. Ngaphezu kwalokho, lesi sipika singaxhumeka kalula kumachweba amaningi ahlukene njenge: Imbobo ye-USB, i-bluetooth, imemori khadi ye-SD…
Inani lomshini wesibili ovela: 2,910,000 iwinile ithusi
Intengo yomshini omusha: 7,990,000 iwinile ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 5.080,000 iwinile I-VND (64%)
Izintengo zomkhiqizo zingashintsha kuye ngesimo samanje somkhiqizo kanye nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lakho lamanje ukuze ubuke ulwazi mayelana nomkhiqizo wesipikha we-Mobell K1507 lapha.
6 I-Dalton Karaoke Speaker TS-12G450X
I-Dalton Karaoke Speaker TS-12G450X Idizayinwe ngokuqinile, enombala omnyama onamandla, idala ukugqama okufanele kwanoma yisiphi isikhala. Le khabhinethi yesipika yenziwe ngokhuni ukwengeza ukuthinta okunethezeka kusipika.
Izikhulisa-zwi ezinamandla aphelele 500W, Isipikha esinezindlela ezimbili umsindo nge bass treble kucace, kwenza umsindo uphakame kakhulu futhi uzwakale. Ngesikhathi esifanayo siza abasebenzisi ukuthi bazizwe bekhululekile lapho belalele. Ikakhulukazi, ungakwazi ukunciphisa ivolumu yesipika noma ulungise ngesilawuli kude, ngendlela efanele ngaphandle kokuya ngqo kusipika.
Ngesibambo esivumelana nezimo kanye nedizayini yesondo, ungayihambisa kunoma iyiphi indawo. Uma ufuna ukubeka isipikha endaweni enganyakazi ungakwazi ukukhiya iphinikhodi esondweni, njengoba isipikha sizoma siqine singasheleli sisuke endaweni.
Inani lomshini wesibili ovela: 2,930,000 iwinile ithusi
Intengo yomshini omusha: 7,390,000 VND ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 4,460,000 iwinile I-VND (60%)
Izintengo zomkhiqizo zingashintsha kuye ngesimo samanje somkhiqizo nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lamanje ukuze ubuke ulwazi mayelana ne-Dalton TS-12G450X puller lapha. .
7I-Mobell MK-2120C 30W .donsa isipikha
Isipikha se-Mobell MK-2120C 30W sidonsa ngedizayini emnyama eyibhanke, ehlanganiswe nokhuni oluwubukhazikhazi olunsundu ngokubukeka okuhle nokujwayelekile, kudala ukugqama kunoma yisiphi isikhala. Ngaphezu kwalokho, ikhabethe lesipikha lenziwe ngokhuni lwekhwalithi ephezulu ukuze linikeze ikhwalithi yomsindo engcono, ezwakalayo.
Izikhulumi ze-Mobell Lokhu kunamandla 30WNgezipikha ezi-2, i-bass ijule impela, ivumela abalaleli ukuthi bacwile eziculweni zomculo eziningi ezidumile.
Umkhiqizo uphinde ufakwe isilawuli kude, okuvumela abasebenzisi ukuthi benze ngendlela oyifisayo imisebenzi ngesipika kalula ukude. Ngesikhathi esifanayo, lesi sipikha sokudonsa sikuvumela futhi ukuthi uxhume kumadivayisi amaningi ngenxa yokuxhumana okuhlukahlukene okungenantambo nokwezintambo.
Inani lomshini wesibili ovela: 930,000 iwinile ithusi
Intengo yomshini omusha: 1,890,000 VND ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 960,000 iwinile I-VND (51%)
Izintengo zomkhiqizo zingashintsha kuye ngesimo samanje somkhiqizo kanye nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lamanje ukuze ubuke ulwazi mayelana nomkhiqizo wesipikha we-Mobell MK-2120C lapha. .
8I-Samsung Tower Speaker MX-T50/XV
I-Samsung MX-T50/XV Tower Speaker inomklamo wombhoshongo onezisekelo eziqinile ezingu-3, ​​izinhlangothi zezipikha ezingu-2 ezigobekile, ezinomklamo oqinile odala ukubukeka okusemfashinini nokuseqophelweni eliphezulu kwanoma yisiphi isikhala. Ikakhulukazi, lesi sikhulumi sinesici esiphezulu sokumelana namanzi, esivimbela ukulimala lapho simanzi.
Umsindo wesipika se-Omnidirectional esinomklamo wesipika esinezinhlangothi ezimbili, amandla afanayo 500W Dala umsindo ophilayo, okhangayo. Nge-booster yomsindo I-Bass Booster nomthelela ekwenzeni umkhathi uphile futhi ushise.
Umkhiqizo nawo unemiphumela ukukhanya okuholileAbasebenzisi bangakwazi Ukukhanyisa okulungiswayo kuhambisana nezinhlobonhlobo zamashuni omculo. Ngalo mphumela, abasebenzisi bazizwa benentshisekelo enkulu futhi becwile kalula emculweni omibalabala nonemibala eminingi.
Inani lomshini wesibili ovela: 3,350,000 VND ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 4,460,000 iwinile I-VND (58%)
Intengo yomkhiqizo ingase yehluke kuye ngesimo samanje somkhiqizo nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lakho lamanje ukuze ubuke ulwazi lomkhiqizo mayelana ne-Tower speaker MX-T50/XV kulokhu.
9Isipikha sikagesi i-Karaoke Birici MX-700
Isipikha se-Karaoke se-Birici MX-700 sakhelwe ngokukhethekile ukuthi sihehe amehlo, sinomumo oqinile, ongunxande oqinile. Ngokuhambisana nalokho, abasebenzisi banganyakaza kalula ngenxa yamasondo angaphansi kwesipika, anganyakaziswa futhi amiswe endaweni yawo.
Amandla esipikha anamandla, adala umsindo ongokoqobo, ozwakalayo, ojabulisa kakhulu. Umkhiqizo uxhunywe ukuze usetshenziswe ngokuqondile, ngakho abasebenzisi akudingeki bakhathazeke ngokuphelelwa ibhethri ngenkathi belalele umculo noma becula i-karaoke.
Ikakhulukazi, Isipikha sikagesi iKaraoke Birici Lokhu kunokulawula okude futhi okusheshayo. Ungalungisa imisebenzi efana nalokhu: ukwandisa noma ukunciphisa ivolumu, shintsha izingoma, khetha imodi yokuxhuma nge-USB, i-Bluetooth, khetha izingoma, ….
Inani lomshini wesibili ovela: 6,440,000 iwinile ithusi
Intengo yomshini omusha: 16,990,000 VND ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 10,550,000 VND I-VND (62%)
Izintengo zomkhiqizo zingashintsha kuye ngesimo samanje somkhiqizo kanye nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lakho lamanje ukuze ubuke ulwazi mayelana nesipikha sikagesi se-Birici MX-700 lapha. .
eziyishumiI-Dalton TS-15G600X Isipikha se-Karaoke 600W
I-Dalton Karaoke Speaker TS-15G600X Ukuba nombala kanokusho, omnyama onamandla, ofanele noma iyiphi indawo. Umzimba wesipika wenziwe ngokhuni lwekhwalithi ephezulu ukuze uthole ikhwalithi yomsindo engcono. Isipika kulula ukuya emuva naphambili, ngenxa yamasondo aso nesibambo esiqinile, esilungele ukukubeka noma yikuphi.
Dalton Izipikha Lokhu kunamandla wokufika 600W ikhipha umsindo onamandla, ozwakalayo. Ngaphezu kokusebenzisa amandla aqondile, umkhiqizo ungashajwa (cishe amahora angu-6-8) ukuze usetshenziswe ngokuqhubekayo. Amahora angu-4-6.
Ngerimothi, ungakwazi ukulungisa kalula imisebenzi kusipika ngaphandle kokuya ngqo. Ngesikhathi esifanayo, ungakwazi ukucula kalula nganoma yisiphi isikhathi kufakwe imibhobho yekaraoke emi-2 ezinikele.
Inani lomshini wesibili ovela: 3,500,000 iwinile ithusi
Intengo yomshini omusha: 8,890,000 VND ithusi
Kushibhe kusukela ku-: 5,390,000 VND I-VND (61%)
Izintengo zomkhiqizo zingashintsha kuye ngesimo samanje somkhiqizo kanye nendawo yesitolo, ungabuyekeza ikheli lamanje ukuze ubuke ulwazi mayelana nomkhiqizo wesipikha we-Dalton TS-15G600X lapha. .
Sicela ubhekisele kwezinye izipikha zokudonsa ezindala ezisebhizinisini e-Dien May XANH ukuze ube nokukhetha okwengeziwe okukulungele!
Nalu olunye ulwazi mayelana Izipikha ezindala eziyi-10 e-Dien May XANH ezicula i-karaoke noma akufanele ziphuthelwe. Sethemba ukuthi ulwazi olungenhla luzokusiza ukuthi ukhethe isipikha esihle kakhulu sokudonsa Ngiyacela!
Chuột Gaming ASUS CERBERUS chính hãng, giá rẻ nhất, nhiều khuyến mãi | Muasalebang
So sánh Vivo V23e 4G với Vivo V23e 5G: Sự khác biệt là gì? | Muasalebang